Umvambo wesikolo esidala ohamba ngesikhephe | Ukuzoba
Umvambo wesikolo esidala ohamba ngesikhephe
El Ulwandle lwaselwandle lukhuthazwe kakhulu kwiiTattoos, ke zininzi imixholo esinokuthi siyifumane itattoo. Ngapha koko, oomatiloshe babephakathi kwabokuqala ukunxiba iitattoos. Namhlanje zininzi iitotoo zesitayile esidala, uhlobo lweetattoo ezaziwa ngokuba yiklasi.
Sobona ezinye iinkuthazo zesikolo esidala yokuphefumlelwa elwandle. Kukho imixholo ephindaphindayo, enje ngeankile, indlu yesibane, izikhephe okanye ii-mermaids. Ngaphandle kwamathandabuzo isitayile esihle esibonelela ngombala omninzi kunye nenkuthazo.
1 Iimpawu zeMermaids
2 Umvambo wesikhephe
3 Tattoo kunye izibane
4 Amathambo oomatiloshe besikolo esidala
5 Iimpawu zehange
Las I-Mermaids yinto eyaziwayo kwihlabathi loomatiloshe. Zizidalwa eziyimfihlakalo ezisezinzulwini zolwandle kwaye zisetyenziswa kakhulu kwiitattoos. Bangabafazi abasisiqingatha kwaye bahlala bezihlaziya bebahle kakhulu, kuba ingabo abatsala oomatiloshe.
Zininzi iitatoo zesikolo ezindala ezitsala amehlo kwaye ezi ziyamangalisa. Inkqubo ye- amaphenyane makhulu kwaye ke ngoko babetha iitatoo. Kwezi tautajes zesikolo sidala zongezwa ezinye iinkcukacha ezinjengeentyatyambo ezinkulu neeankile. I-Swallows ikwanazo neenkcukacha ezongezwa kwiitattoos.
Tattoo kunye izibane
IiTattoos zale ndlela zinemibala kakhulu, ukuze sikwazi ukubona iithoni ezininzi ezinamandla njengombala obomvu okule Iimpawu zentloko. Iindawo zokukhanya azifanekiseli kuphela umhlaba waselwandle, kodwa kunye nokukhanya okwenziwe ebumnyameni, isikhokelo ngamaxesha amnyama. Ke siyazibona ezi tattoos njengeenkcukacha ezintle ezineetoni ezibomvu ezenziwe lulwandle.
Amathambo oomatiloshe besikolo esidala
Los Iitattoos zolwandle bakwanazo nezinye iimpembelelo ezininzi. Sifumana abanye oomama ababhinqileyo kwisitayile esicocekileyo esidala. Ngombala obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka, ngeentyatyambo njengezakhelo, intambo kunye nolwandle ngasemva zinokuba zizimvo ezintle zokongeza kumvambo.
Las iiankile kwisitayile esidala sesikolo Zijonge kakhulu, njengeenkcukacha ezongezwa zodwa okanye nezinye izimvo. Kule meko, iiankile zineenkcukacha ezimibalabala kwaye zifanekisela into esincamathele kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Umvambo wesikolo esidala ohamba ngesikhephe
Iitattoo, zabathandi bokwenene bomculo
Iitattoo zezilwanyana ezincinci, inkunkuma yokucinga